> Resource > iPad > Sida loo hagaagsan iPad in Computer New
Waxaan iibiyey computer jir ah oo iibsaday cusub. Waxaan rabaa in aan u hagaagsan iPad 2 la Lugood on computer cusub. Sidee baan u gudi karo this?
Damacsan tahay in ay u hagaagsan aad iPad la Lugood on computer cusub? Waxaa laga yaabaa inaad hesho qoraal ah, isagoo u sheegay aad waayi doonto xogta ku saabsan iPad. Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad u hagaagsan iPad in computer cusub iyada oo aan la lumin? U deji. Halkan waa xal wanaagsan. Wondershare TunesGo (for Windows users) ku siinayaa awood u leeyahay inuu u hagaagsan music, filimada, playlists, Lugood U, podcasts, buugaag, TV muujinaysaa in Lugood cusub oo aan waxba laga badiyay, iyo xog dheeraad ah, sida sawiro, xiriirada iyo SMS si computer cusub.
Fiiro gaar ah: The version Mac - Wondershare TunesGo (Mac) waxaad ogolaanaysaa u hagaagsan music iyo playlists cusub Lugood iyo gurmad music, sawiro, filimada, podcasts, Lugood U, videos music, audiobook, meno cod iyo TV muujinaysaa in computer cusub.
Sida loo hagaagsan iPad in computer cusub
Labada versions shaqeeyaan si la mid ah. Just download iyo rakibi version saxda ah ee barnaamijkan. Halkan, waxay kuu ogolaanaysaa 'bilaabo version daaqadaha.
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad la computer cusub
Orod TunesGo Wondershare on computer cusub. Connect aad iPad la computer cusub adigoo isticmaalaya cable USB la socota iPad ah. Markaas, furmo suuqa hoose booda sida shaashadda hoose ayaa muujinaya.
Fiiro gaar ah: Labada qeybood oo la jaanqaadaan iPad isha bandhigay, iPad mini, iPad 2, iPad Air, iPad New iyo iPad 1 marka ay ordaya macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo macruufka 9.
Tallaabada 2. nidaameed iPad in computer cusub
Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan idin tusin siyaabaha si hagaagsan files iPad in Lugood on computer cusub, iyo in ay gurmad files iPad on computer cusub.
Si aad u hagaagsan xogta iPad in Lugood cusub si fudud, waxaad riixi kartaa "iDevice Copy in Lugood", icon ee khadka hoose ee suuqa hoose. Markaas, guji "Start"> "Copy in Lugood".
Ama, waxaad riixi kartaa "Media" iyo "Playlists" khaanadda tagay siday u kala horreeyaan si hagaagsan xogta si Lugood. Media waxaa ka mid ah muusikada, filimada, videos music, Lugood U, podcasts, buugaag iyo bandhigyada TV.
Haddii aad rabto in gurmad xogta iPad in kombiyuutarka , guji tab kasta khaanadda bidix. Dooro files baahisey ka dibna riix "Dhoofinta in". Daaqadda file browser, doorato meel si loo badbaadiyo files iPad.
Fiiro gaar ah: In uu furmo suuqa priamry, guji "Dhoofinta Music si gal" si hagaagsan music iPad in computer cusub.
Iyadoo TunesGo, waa mar dambe ma aad dhibaato si hagaagsan iPad la PC cusub. Download barnaamijkan u leedahay in isku day ah hadda!
Inta lagu wareejiyo, waa in aad hubisaa in aad iPod ku xiran mar walba sameeyo.